Japana: Fanombohana Matanjaka Any Amin’ireo Lalao Olaimpika 2016 Ao Rio · Global Voices teny Malagasy
Japana: Fanombohana Matanjaka Any Amin'ireo Lalao Olaimpika 2016 Ao Rio
Voadika ny 08 Aogositra 2016 3:19 GMT
Atleta Japoney iray tsy fantatra anarana tao amin'ny Tananàn'ireo Atleta. Sary an'ny Kaomity Olaimpika Meksikàna. Fanomezan-dalana: CC BY-NC-ND 2.0
Tsara fanombohana i Japana any amin'ireo lalao olaimpika 2016 ao Rio de Janeiro, ary ny andro fahatelon'ireo lalao dia efa nahazo medaly volamena fara-fahakeliny iray sy medaly alimo efatra. Azo tamin'ny Judo, fibatàna fonjamby ary lomano ny medaly alimo efatra, ary nambaran'i Hagino Kosuke fa ny medaly volamena azon'i Japana tamin'ny hazakazaka 400 metatra olon-tokana lehilahy no voalohany tamn'ireo Lalao .
Nobatain'i Hagino Kosuke ny medaly volamena voalohany ho an'i Japàna [tamin'ireo lalaon'ny lohataonan'i Rio]. Nifaninana teo anivon'ireo fanantenana avo, nahavita i Hagino. Tamin'ny fanazarantena mafy sy fifantohana tamin'ny nofinofiny hiatrika lalao olaimpika hatramin'ny fahazazany, norombahan'i Seto Daiya ihany koa ny medaly alimo tamin'ny lomano. Niakatra ny lampihazo ireo mpilalao Japoney. [- Kaonty Twitter Ofisialin'ny Komity Olaimpika Japoney.]
Fanohizana ny fakàn'i Japana medaly amin'ny Lalao olaimpika vao haingana, nibata medaly alimo teo amin'ny sehatry ny judo vehivavy 48 kg i Kondo Ami.
Ity no lalao olaimpika voalohany ho ahy. Raha mbola nalahelo aho, tsy mba nahazo medaly volamena, sentom-po lalina no tsapako tao anatiko tao teo ampandraisana ny medaly alimo […] Hotohizako ny fanazarantena mba ho mafy kokoa ary ho mafy hatrany. Misaotra indrindra amin'ny fanohanana rehetra izay azoko hatramin'ny anio.
Vehivavy iray mpikambana amin'ny tarika olaimpikan'i Japana no nanampy tamin'ny fakàna medaly iray tany ampiandohan'ireo Lalao tao Rio. Fifaninanana ho an'ny sokajy vehivavy 48 kg, nahazo ny medaly alimo i Miyake Hiromi
Azon'i Miyake Hiromi ny medaly alimo teo amin'ny sokajy zazavavy 48 kg. Jereo eto ao anatin'ny rohy ny fandreseny.
Nahazo ny medaly fahadimy ho an'i Japàna i Takato Naohisa, nandrombaka ny medaly alimo tamin'ny judo ho an'ny sokajy lehilahy 60 kg.
Naohisa Takato (Japana/Medaly Alimo) x Orkhan Safarov (Azerbaijan) Firenena maro mba ho tsidihina pic.twitter.com/MwQwfjZ7yc
Ireo fanentanana avo mbola haka ireo Medaly misimisy ho an'i Japana
Ity faran'ny herinandro voalohany amin'ireo lalao olaimpika ao Rio ity dia andrandraina ho fanombohana fotsiny ihany amin'ny fakàn'i Japàna medaly olaimpika. Antenaina hanao tsara, mandritra ireo herinandro roa ho avy, ireo tarika mpilomano vehivavy sy lehilahin'i Japana.
Eny tokoa, nanamotsana ny zavabita tsara indrindra tamin'ny lomano mifampitohy ireo vehivavy Japoney nandritra ny fifanintsanana isan-tarika :
Uchida Miki, Ikeh Rikako, Yamaguchi Misaki, ary Matsumoto Yayoi dia nipoitra tamin'ireo tafakatra ho amin'ny 400 m mifampitohy, sokajy vehivavy […] Nomontsanin'izy ireo tamin'ny iray segondra mahery monja ny zavabita tsara indrindra any Japana [tamin'ity faran'ny herinandro ity tao Rio].
Azo an-tsaina tsara fa nientanentana ny tarika. Nandefa bitsika i Swimmer Yamaguchi Misaki fa:
Voalohany tao anatin'ny valo taona no nahatongavanay teo amin'ny lalao famaranana olaimpika […] Faly be aho afaka miaraka milomano amin'ny tarika tsara indrindra [eto amin'izao tontolo izao]. Tamin'ny fanonezana ny rehetra avy aminay mba tsy ho resy, ary hofarananay amin'ny fiakarana eo ambony lampihazo.
Tamin'ny fifaninanana tao amin'ny vondrona A, henjana ihany koa ny fanombohana nataon'ireo tarika -Vehivavy Japoney mpilalao basikety Olaimpika.
(Andro faha-2) Efa ho 12 taona izay hatramin'i Atena, no niatrika farany lalao Olaimpika ny tarika vehivavy Japoney mpilalao basikety. Taorian'ny nandrombahana fandresena tamin'i Bielorosia, tafakatra ho amin'ny fihodinana manaraka ny tarika vehivavy Japoney […]
Ireo Faharesena Aloha Loatra Nahafanina Ireo Japoney Mpilalao Olaimpika Sasantsasany
Tojo tsy fahombiazana ireo fanantenan'ny mpilalao Olaimpika Japoney hafa, na niatrika ny faharendrehan'ireo nofinofy Olaimpikany. Marihina manokana amin'izany ilay Japoney Ota Yuki, kintan'ny ‘escrime’ nifaninana tamin'izay nantenaina ho ny lalao Olaimpikany farany mialohan'ny handehanany hisotro ronono, voatery niàla nandritry ny faran'ny herinandro voalohan'ny Lalao:
Resy ary voatery niala i Fencer Ota Yuki tamin'ny fihodinana voalohan'ny ‘escrime’ sokajy Lehilahy. “Tsy misy nenina ho ahy,” hoy izy.
Resin'i Nizeria ihany koa ireo Japoney lehilahy mpilalao baolina kitra tamin'ny lalao Olaimpika voalohany nataony, saingy mbola manana vintana ny hanohy ny tarika, raha toa ka mahavita mandresy amin'ny lalao manaraka izy ireo:
Ireto ireo hevitra misongadina avy amin'ny lalao nifanandrinan'i Nizeria tamin'i Japana. Tsy misy te-hilalao fiarovantena ny rehetra
Inona no Nanjo ireo Vehivavy Mpilalao Baolina Kitra?
Angamba ny hadisoam-panantenana goavana indrindra ho an'ireo Japoney mpankafy dia izay nitranga talohan'ny nanombohan'ireo Lalaon'i Rio. Tsy nahavita niakatra akory ho amin'ireo Lalao Olaimpika ny ekipa nasionaly vehivavy japoney mpanao baolina kitra, fantatra tsara amin'ny hoe “Nadeshiko Japan,” tonga teo amin'ny laharana faharoa tamin'ny Fiadiana Tompondaka Erantanin'ny taona 2015.
Ny tsy fisian'ny fiakarana an-tsehatra dia niteraka kiana sy fandinihantena ho an'ireo Japoney mpankfay baolina kitra:
Miteny i Sawa sady tsy faly: : https://t.co/oge5MGb9EC #AFCWOQ pic.twitter.com/Zk2prvWj20
Mbola hanohy hanome vaovao mikasika ny zavabitan'i Japàna any amin'ireo Lalao Olaimpikan'ny taona 2016 ny Global Voices.
20 ora izayMyanmar (Birmania)